Malunga ne-US | Yongeza
Inkonzo yokumisa isisombululo esinye sezixhobo zefanitshala.
Ibhola ethwele ibhola
Isiphatho sentsimbi engenasimo
Ikhaya > Ngathi
I-Shanghai Cooreth Holdware Co. I-LTD i-SHRORD ye-SHRORD ye-SHREWARHE YENKONZO YABASEBENZI. Sinika ngaphezulu kwamawakawaka eemveliso kubandakanya uluhlu olupheleleyo lwe-hardware efana ne-hinge, isilayidi, isiphatho, isitshixo, umlenze wetafile kunye nezinye iimveliso ezinxulumene noko. Sifumene imvume njenge China, iYurophu neMigangatho esemgangathweni yaseMelika.
Okwangoku sinothungelwano lokuthumela kumazwe amaninzi kwaye lonwabele igama eliphezulu e-US, Yurope naseShanghai Concen Shridwar Hos. I-LTD ngu Umthengisi wezixhobo zeflethi zeZiseko zeZiseko zeZiseko zeZiseko zeZiseko zePright uneminyaka emininzi yamava. Sinika ngaphezulu kwamawakawaka eemveliso kubandakanya uluhlu olupheleleyo lwe-hardware efana ne-hinge, isilayidi, isiphatho, isitshixo, umlenze wetafile kunye nezinye iimveliso ezinxulumene noko. Sifumene imvume njenge China, iYurophu neMigangatho esemgangathweni yaseMelika.
Sinabasasazi abaninzi kwihlabathi liphela kwaye banandipha igama eliphezulu e-US, eYurophu naseAsia.
Umgangatho othembekileyo, inkonzo eguqukayo kunye ne-Revatures entsha yi-Tenet yethu. Sisoloko sisebenza ukuphucula kwaye rhoqo kudale ixabiso lamaqabane ethu.
Ngokusekwe kumava ethu esityebi, Iqela labasebenzi kunye nenkqubo yenkonzo enoxanduva, sijongwa njengabathengi ' Ukuthenga i-ofisi yase China. Siyavuya kuba nemizobo yakho kunye neesampuli zokuphuhlisa iimveliso ezintsha, kwaye siya kudibanisa izixhobo zeshishini ngokufanelekileyo kwaye silawule iindleko ngokungqongqo ukwenza inzuzo ngakumbi kubathengi. Silindele ngokunyanisekileyo ukuba sisebenzisane nawe. Intanda-bulumko yethu yeshishini ukuba i-a Uhlobo oluthembekileyo lwezixhobo zefreyiti kunye nokudala ixabiso kubathengi bethu, abathengisi, kunye noluntu. Uphuhliso lwethu luvela ekufumaneni okungafunekiyo kunye nokungazinzi.
Sibonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kumanqaku ohlukeneyo exabiso eliza kwenza ukuba kube lula kuwe ukulungiselela iimfuno zoluhlu olubanzi nabathengi abakhoyo. Yongeza kwimfundo ekhethekileyo ekuboneleleni ngeemveliso ezinendleko zenkonzo esemgangathweni.
Nanini na xa ufuna inkxaso yemveliso, iisampulu, amaxesha emveliso ngokukhawuleza, ukuthunyelwa kwemali ... Yongeza uhlala apha kuwe!
Iqela lethu elinamava, iqela lethu liya kukubonelela ngenkonzo ebalaseleyo yabathengi yonke imihla.
Nanini na xa ufuna inkxaso yemveliso, iisampulu, amaxesha emveliso ngokukhawuleza, ukuthunyelwa kwemali ...
Sisoloko silapha kuwe.
Yongeza Isityalo kunye nezixhobo
Ityala eliphezulu lokuphela
Inkonzo yokumisa enye yeSisombululo seZixhobo zeHardware Hardware
Ikhaya Iimveliso Inkonzo NGATHI Ityala Iindaba QHAGAMSHELANA NATHI
I-TLE: +86 - 021-5844 6290
Idilesi: Igumbi C02, isakhiwo 6, No.351, indlela yeSizhuan, eSijiing idolophu, i-sinjaiang yesithili, i-Shanghai, China.